#Eric Bailly oo qalliin lagu sameeyey, xilli la xaqiijiyey mudada uu.. - Get Latest News From Horn of Africa
#Eric Bailly oo qalliin lagu sameeyey, xilli la xaqiijiyey mudada uu..
By WARIYAHA CAALAMKA On Jul 31, 2019 Last updated Jul 31, 2019
Waxaa la xaqiijiyey mudada uu garoomada ka maqnaan doono difaaca kooxda kubadda cagta Manchester United ee Eric Bailly, kaddib markii qalliin lagu sameeyey.
Eric Bailly oo qalbadda dhexe ee daafaca kaga ciyaara kooxda Man United ayaa garoomada ka maqaan doona illaa dhammaadka sanadkaan kaddib markii uu maray qalliin jilibka ah.
Hoggaamiyaha Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer waxa uu shaaca ka qaaday in xiddigiisa Eric Bailly uu garoomada ka maqnaan doono muddo afar illaa shan bilood ah kaasoo dhaawac halis ah uu ka soo gaaray kulankii saaxiibtinnimo oo ay ka adkaadeen kooxda Tottenham.
Macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaa warbaahinta u sheegay kaddib kulankii ay kooxdiisu 1-0 kaga adkaaday dhawaan naadiga Kristiansund, kaasoo ka dhacay caasimadda Waddanka Norway: “Eric Bailly waxaa lagu sameeyay qalliin, waxa uu garoomada ka maqnaan doonaa afar illaa iyo shan bilood, waxaan rajaynayaa inuu garoomada ku soo laabto waqtiga ciidda gaaleedka.”
Si kastaba ha ahaatee, Bailly ayaa dhaawac kan la mid ah uu ka soo gaaray jilibka midig xilli ciyaareedkii la soo dhaafay taasoo keentay inuu muddo dheer garoomada ka maqnaado, waxaana haatan soo gaaray dhaawac kale oo uu garoomada ka maqnaanayo inta ka harsan sanadkaan 2019 sida uu xaqiijiyey macallinka Man United ee Ole.